ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ချိတ်တွဲခြင်းနှင့်စုံတွဲနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ၌အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, နှောင်ကြိုးများနှင့်လင်မယားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2017) အကြားအစည်းအရုံးများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုက်ဘာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၏အခန်းက္ပ
Vol.06 No.01 (2017), အပိုဒ် ID: 72840,18 စာမကျြနှာ
10.4236 / sn.2017.61001
Anik Ferron1, Yvan Lussier1*, Stephan Sabourin2, ခြေ Brassard3
ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လူကြီးများသည်လက်ရှိတွင် [အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုပိုပြီးပွင့်လင်းကိုပြသပေမယ့်1] ဤအပြုအမူလက်ထက် [စုံတွဲပဋိပက္ခများနှင့်မတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်2] ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် 1) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပူးတွဲမှုအကြားဆက်ဆံရေး၌၎င်း, 2) စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်ရန်။ စုံတွဲဆက်ဆံရေး (ပျှမ်းမျှအသက် = 779 နှစ်) အတွက် 29.9 ပါဝင်သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းအွန်လိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုစီးရီးပြီးစီးခဲ့သည်။ 65% ဒါတစ်ပတ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အရ, သင်တန်းသားများ၏ 16.3% လေ့လာမှုရှေ့အခြောက်လအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အရွယ်ရောက် site ကိုသွားရောက်ခဲ့သည်။ Path ကိုမော်ဒယ်ရလဒ်များကိုအကြား, တလက်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပူးတွဲမှုအပေါ်, နှင့်အခြားသောလက်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ် sequential ပြုပြီဖြစ်ကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုစနစ်တကျပိုကောင်းအသစ်ကစုံတွဲဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ဒိုင်းနမစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆက်စပ်မှုမှတ်တမ်းတင်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
keywords: အင်တာနက်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, ဆိုက်ဘာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း, လင်မယားကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, နှောင်ကြိုး
, လက်လှမ်းအမည်မသိနှင့်တတ်နိုင်လုံလောက်စွာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖော်ပြရန်ကြောင်းအသုံးအနှုန်းများဖြစ်ကြောင်း  ။ ညစ်ညမ်းအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက် ပို. ပို. လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း  ၎င်း၏အသုံးပြုမှု, မယား trivialize ဖောက်ပြန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုငျ  , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနုတ်မနှင့်ပင်တဦးတည်းရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုလျှော့ချ    ။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးအမြင်စုံတွဲမကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်  ။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုတဲ့အခါသို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ [တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်10] ။ ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကျယ်ပြန့်အယူခံဝင်များ၏သက်သက်အရေအတွက်, သုတေသီများ [စုံတွဲဒိုင်းနမစ်အတွင်း၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားကြ1]     ။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏လူကြိုက်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုစစ်တမ်းများ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများအဆင့်ဆင့် 60% ကိုရောက်ရှိနိုင်မပြခဲ့ကြ14] ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆနျးစစျဖို့ဖြစ်တယ်1 1) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကိုမလုံခြုံမှု (exogenous variable တွေကို), နှင့် 2) စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု (endogenous variable တွေကို) အကြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်သုံးပါနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် (sequential ဖျန်ဖြေ variable တွေကို) ။
ညစ်ညမ်း၏အဓိပ်ပါယျ [တစ်ခုချင်းစီယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွေ့အကြုံများပေါ် မူတည်. ကွာခြားနိုင်ပါတယ်15] ။ ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလူမှုရေး interaction ကမှတဆင့်သင်ယူခဲ့ကြကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များဆောက်လုပ်နေကြသည်  ။ ရိုးရာမြောက်အမေရိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များယောက်ျားအရေးပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှိသည်အကြံပြု; အမျိုးသမီးလိင်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, လူ့အဖွဲ့အစည်းများကတန်ဖိုးထားကြသည်။ တစ်ဦးမြောက်အမေရိကအခြေအနေတွင်အလွန်လိင်တက်ကြွသောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးယုတ်ညံ့လူမှုရေးအဆင့်အတန်းရှိတယ်။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် script လူ့ကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမွမ်းမံသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းသိသာထင်ရှားသောလူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြွမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်  ။ ယနေ့ရိုးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များထံမှခြိုးဖောကျ [တိုးမြှင့်ကျားမညီမျှမှုကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပိုအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်18] ။
ကာရိုး et al ။  လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ်ဗလာတင်ဆက်ထားပါတယ်အွန်လိုင်းဓါတ်ပုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသတ်မှတ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကာမဂုဏ်အပေါ်မအင်္ဂါနှင့်ပိုပြီးအပေါ်လျော့နည်းအာရုံစိုက်ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများလည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေပါဝင်သည်ပေမယ့်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းရှိခြင်းဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဤရွေ့ကားအွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအင်တာနက် (webcam သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ချက်တင်) ကနေတဆင့်တစ်ဦးတည်းဖျော်ဖြေ (ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့် masturbating) သို့မဟုတ်သူတစ်ပါး၏မျက်မှောက်၌နိုင်ပါသည်  ။ တစ်ဦးချင်းစီပြီးသားတစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဆိုပါကဤအပြုအမူဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ပြုမူသောအမှုအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု relational ဆက်စပ်မှု
Doran နှင့်စျေးနှုန်းအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု  ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက် 20,000 ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုယောက်ျား၏ 17% ပြသခဲ့သည်နှင့်အမျိုးသမီး၏ 3% သည်လွန်ခဲ့သော 30 နေ့ရက်ကာလ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ကာရိုး et al အားဖြင့်အလားတူတွေ့ရှိချက်ထောက်ခံပါတယ်။ , ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးလူဦးရေအတွက်ကြောင့်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ယောက်ျား-ပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေ-ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်းသာ 27% ၏ 2.2% တွေ့သောသူ။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျား [ညစ်ညမ်းလောင်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်20]   ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုသည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်လည်းလျော့နည်းလိင်စိတ်နိုးထအစီရင်ခံ  ။ ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏပြဿနာနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကြောင့်သုတေသီများအသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးပုံစံများမှလျော့နည်းအာရုံကိုမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။
တချို့ကသုတေသီများ [လိင်စွဲလမ်းတစ်ခေတ်သစ်ပုံစံအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု conceptualized ပါပြီ24]  ။ သို့သော်အနည်းငယ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအလူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ပူးတွဲမှုလုံခြုံမှုတွေကိုဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်, စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတာပုံကိုသရုပ်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
ယခင်လေ့လာမှုများအရကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (neuroticism၊ extroversion, အတွေ့အကြုံရရန်ပွင့်လင်းမှု၊ သဘောတူလက်ခံမှုနှင့်အသိစိတ်ရှိမှု) တို့သည်စုံတွဲများအားမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Malouff, Thorsteinsson, Schutte, Bhullar, & Rooke ကိုကြည့်ပါ)26] ပြန်လည်သုံးသပ်), နှင့်ပိုပြီးခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်အတူ  ။ ဤအစရိုက်များအချို့သည်ယင်းကဲ့သို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေများအတွက်အကောင့်ပေလိမ့်မည်။ အလှည့်မှာတော့အဲဒီအပြုအမူတွေကိုစုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းပေလိမ့်မည်။ ယခုတိုငျအောငျ, ဒီမော်ဒယ်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနများ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သေးပါဘူး။
Egan နှင့် Parmer ကလေ့လာမှုမှာ , သာ neuroticism, နှငျ့ညီညှတျနှင့်အသိစိတ်ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသည် et al ။  အလားတူရလာဒ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အနိမ့် altruism (ညီညှတျ) နှင့်တစ်ဦးတက်ကြွစိတ်ကူးစိတ်သန်း (ပွင့်လင်း) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကဤဆက်ဆံရေးကိုလည်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။ Emmers-Sommer, Hertlein နှင့်ကနေဒီ  မသက်ဆိုင်ကျား၏, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်သစ္စာမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အလွန်နည်းပါးလေ့လာမှုများ [In-လူတစ်ဦးဖောက်ပြန်ပေါ်တွင်အဓိကအာရုံစူးစိုက်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကြားဆက်ဆံရေးစူးစမ်းကြပါပြီ31]  ။ နှငျ့ညီညှတျနှင့်အသိစိတ်အဖြစ် extroversion ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အပို dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ဆက်စပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုထိုကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နဲ့ဆက်စပ်နေလျှင်, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, သိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
လေ့လာရေး [ပူးတွဲဖိုင်ကို-စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း၏နှစ်ခု key ကိုရှုထောင့်စုံတွဲမကျေနပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောလုံခြုံမှု-ဖြစ်ကြောင်းပြသကြ33] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု  ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာစေရန်, ပူးတွဲမှု, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကြားဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း [မှတ်တမ်းတင်နေသည်35] ။ ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအတှေ့အကွုံ သာ. ကြီးစုံတွဲတစ်တွဲမကျေနပ်မှုအပေါ်မြင့်မားသောဂိုးသွင်းသူတွေကို  နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်  ။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့လူ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်နားလည်နိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူပူးတွဲမလုံခြုံမှုစဉ်းစားရန်သက်ဆိုင်ရာပုံရသည်။
attachment-related စိုးရိမ်စိတ်ဆိုးတပါးနှင့်တပါးတည်းရဲ့မိတ်ဖက်များကပယ်ချဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးဇွဲကိုကွောကျရှံ့ခွငျးအားဖွငျ့သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမျတပူးတွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုယေဘုယျအားယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြည့်စုံလိင်ကိုရှာဖွေ   ။ attachment-related ရှောင်ရှားခြင်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရငျးနှီးမှုနှငျ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှီခိုနှင့်အတူအီဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Avoidantly ပူးတွဲတစ်ဦးချင်းစီ [မည်သို့မည်ပုံဤသူတို့ရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏လိင်ပိုင်းအလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ကပိုများပါတယ်33] ။ စာပေဒသူမ၏ပြန်လည်သုံးသပ်, Dewitte [အတွက်39] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းချိတ်ဆက်သောယန္တရားများစာရွက်စာတမ်းသုတေသီများပိုကောင်းသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ antecedents နှင့်ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, Szymanski နှင့် Stewart က-ရစ်ချတ်ဆန်၏အကျိုးဆက်များကိုဆန်းစစ်  အမျိုးသားများတွင်ကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပြပေမယ့်လည်းသွယ်ဝိုက်ကြောင့်ပူးတွဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ sequential ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သော။ ပိုများသောအထူးသ, သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုကျားမအခန်းကဏ္ဍအလှည့်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်သောပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားရန်အပြုသဘောနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Szymanski နှင့် Stewart က-ရစ်ချတ်ဆန်ရဲ့အဆိုအရပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသူတို့ဆက်ဆံရေးအတွက်အားနည်းချက်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့များပါတယ်။ ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဟာရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးဖြစ်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်ယခုတင်ပြသောစာရေးဆရာများသာယောက်ျားရဲ့ပူးတွဲမှုလုံခြုံမှုတွေကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဆက်ဆံရေးစူးစမ်း။
အွန်လိုင်းဖောက်ပြန်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ပူးတွဲမှုနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်အကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သုတေသနအဓိကအား In-လူတစ်ဦးဖောက်ပြန်အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ပူးတွဲမှုမလုံခြုံမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ [extradyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံထွက်ရှာပိုပြီးရှိုများမှာ32]    ။ ဒါက [အစွန်းရောက်ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်မှန်43]   ။ ကျနော်တို့ကို attachment နှစ်ခုစလုံးမလုံခြုံအတိုင်းအတာအွန်လိုင်းဖောက်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆိုပါစို့။
သုတေသန [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းဖောက်ပြန်၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်1]  အထူးသဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစ်တာကာလအတွင်းယောက်ျားအတွက်  ။ Stack, Wasserman နှင့် Kerns ကလေ့လာမှုမှာ , နောက်ဆုံးလများတွင်ပိုမိုထက်သုံးကြိမ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောခဲ့သူလူကြီးများ extradyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူးခဲ့သူလူကြီးများထက်သစ္စာမဲ့ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ Wysocky နှင့် Childers  ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသုံးကြိမ်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်စဉ်သူတို့က, ဘာအတွက်စေ့စပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အွန်လိုင်းမှ extramarital ကြားဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ငါးဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပေါင်းလဒ်များတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ variable တွေကိုဖြန်ဖြေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်ယခုတိုငျအောငျ, အဘယ်သူမျှလေ့လာမှုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကြားဆက်ဆံရေး၏ညှနျကွားသတ်မှတ်ထားသောသိရသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအွန်လိုင်းအပို dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတင်ပြသည်။
ယေဘုယျအားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဆိုးစုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်       ။ Willoughby et al ။  အတွင်း-စုံတွဲဆက်သွယ်ရေး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စုံတွဲမကျေနပ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ယောက်ျားရဲ့ကျူးကျော်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုအမျိုးသမီးရဲ့အနိမ့်လိင် drives တွေကိုစောဒကတက်, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ပါပြီ။ Muusses et al ။  [Landripet နှင့်Štulhoferအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်ကိုထောက်ပံ့သောယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနိမ့်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါပြီ50] ။ ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အသုံးပြုမှုကို သာ. ကြီးမြတ်အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်  နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်  ။ ဒီလေ့လာမှုတွေများ၏ပေါင်းစပ်ရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှတဆင့်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုရှင်းပြသောအဆိုတင်သွင်းရာလက်ရှိမော်ဒယ်၏အခြေခံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးဒီဆက်နွယ်မှုဟာပါဝင်သူရဲ့ကျားပေါ် မူတည်. ကွာခြားသငျ့သညျ။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် [ ပို. ပို. လေ့လာခဲ့51]   ။ အဆိုပါခြုံငုံသဘောတူညီမှု [ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်စုံတွဲမှအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်54]  ။ အချို့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်၏ပျံ့နှံ့ [63.6% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်47] ။ သင်တန်းသားများကိုအက်ရှလေ Madison, extramarital ဆက်ဆံရေးများအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်သို့သော်ဤစာရင်းဇယားပေါ့ပေါ့ယူရပါမည်။ ကျနော်တို့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုမှဆက်စပ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ လူတို့တွင်ဖောက်ပြန်၏နှုန်းထားများအမြိုးသမီးမြားအကြားထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါလူသိများကြောင့်   [58ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကြည့်သည့်အခါ], ကျားမဖြေရှင်းရပါမည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကတစ်ဖက်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တွယ်တာမှုနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုရှင်းပြသည့်ကက်စကိတ်ပုံစံကိုအဆိုပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပူးတွဲဖိုင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုယူဆ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှုသည်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။21]), ကျနော်တို့မော်ဒယ်ကျားအဆိုအရကွာခြားလိမ့်မည်ဟု hypothesize ။
နမူနာ 779 အဘိဓါန်ပွငျသစျကနေဒါနိုင်ငံသားတစ်ဦးကကွန်ပျူတာကိုသုံးခြင်းနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိဖြစ်နှင့်သောကွိဘက်အတွက် (524 အမျိုးသမီးများနှင့် 255 ယောက်ျား) လူနေမှုပါဝင်သည်။ လေ့လာမှုအွန်လိုင်းကောက်ယူနှင့်သင်တန်းသားများ၏နံပါတ်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ထွက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကတည်းကသင်တန်းသားများ၏နံပါတ်လာမည့်တမေးခွန်းလွှာ variable ကိုထံမှပြောင်းလဲသွားတယ်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းမှာအရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းသတင်းပေးပို့သူတို့တွင်, 230 ယောက်ျားနဲ့ 272 အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ လေးယောက်ပါဝင်စံလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်: သင်တန်းသားများကို, လေ့လာမှုစတင်ခြင်းမှာစုံတွဲတစ်တွဲဆက်ဆံရေးအတွက်ခဲ့ကြသည် 18 နှင့် 65 ၏အသက်အရွယ်အကြားခဲ့ကြသည်, အင်တာနက် access ကိုခဲ့နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များအကြောင်းကိုအွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာများအပိုင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို '' ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း 17.5% (ဎ = 102) အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးခဲ့ 6% (ဎ = 35) အသက်မွေးမှုလေ့လာမှုများ၏ဒီပလိုမာခဲ့ 36.9% (ဎ = 215) ယေဘုယျအားဖြင့်ကွိဘက်, ကောလိပ်ပညာရေးအတွက်ကောလိပ်ဒီဂရီ (ရှိခဲ့ )2သို့မဟုတ်3နှစ်ပေါင်းအထက်တန်းကျောင်းအပြီးအထိချဲ့ခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုလေ့လာမှုများ precedes, 25.3% (ဎ = 147) တစ်ခုဘွဲ့ကြိုတက္ကသိုလ်ဒီဂရီခဲ့ခြင်းနှင့် 14.9% (ဎ = 87) တစ်ဦးဘွဲ့ရတက္ကသိုလ်ဒီဂရီရှိခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း 456 သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု (79.4%) ၏အချိန်မှာအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ 91.4%% ရိုးရိုးခဲ့ကြသည်လိင်တူဆက်ဆံသူနှင့် 3.1 စဉ်သင်တန်းသားများ, (5.5%) အဓိကအားဖြင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. တက်ရောက်လာသူများ၏ 14.8% စုံတွဲတစ်တွဲဆက်ဆံရေးအတွက်ခဲ့ကြသည်ပေမယ် cohabiting မခံခဲ့ရ, 36.2% လက်ထပ်ခဲ့ 41.1% ဘုံယောက်မိတ်ဖက် ရှိ. , 7.9% ကွဲကွာခဲ့ကြသို့မဟုတ်လက်ရှိအသစ်တခုမိတ်ဖက်နှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲဆက်ဆံရေးအတွက်စေ့စပ်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို၏ပျမ်းမျှအသက် (SD က = 29.85) 9.91 နှစ်ပေါင်းကြီးနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးပျမ်းမျှအလျား 6.36 နှစ်ပေါင်း (SD က = 6.57) ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကို Facebook ကဒေသခံသတင်းစာများမှတဆင့်ဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်များစုဆောင်းနှင့်အီးမေးလ်များကိုစက်တင်ဘာလ 2011 မှမတ်လထံမှထွက်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုစစ်တမ်းမျောက်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ရတယ်။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်၏ဆော့ဖ်ဝဲသင်တန်းသားများကို '' လျှို့ဝှက်သေချာနှင့် (data တွေကိုစာဝှက်စနစ်အပါအဝင်) တင်းကြပ်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများအောက်ပါအတိုင်း။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုရဲ့ရည်မှန်းချက်၏အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆော်သောတစ်ဦးချင်းစီအချက်များဆန်းစစ်နှင့်စုံတွဲကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးခွင့်ပြုချက်ပုံစံဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လျော်ကြေးအဖြစ်ငါး $ 100 ဆုကြေးဇူးကိုလက်မှတ်များသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမျှဝေပေးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသောကျပန်းနှင့်ဖြန့်ဝေသင်တန်းသားများမှာရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးလူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာအပါအဝင်အများအပြားစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများပြီးစီးခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သင်တန်းသားများကို 45 မိနစ်အွန်လိုင်းမေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး 15 ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်   ငါးအချက် Likert စကေးပေါ်တွင်တိုင်းတာရာ, ထိုငါး-Factor ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမော်ဒယ်၏ရှုထောင့် : neuroticism (အနိမ့်စိတျပိုငျးဆိုငျရာတည်ငြိမ်မှု, ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနိမ့်ရသပ္ပါယ်စွမ်းရည်; = 0.79 α), extroversion (အလွန်အမင်းလူ့ဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်, ယုံကြည်မှု; = 0.73 α), မတူညီအတွေ့အကြုံများစိတ်ဝင်စားကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုစပ်စုအတွေ့အကြုံကိုမှပွင့်လင်း (, α = 0.63), နှငျ့ညီညှတျ (ဖော်ရွေစာနာ, အထောကျအကူ; α = 0.71) နှင့်အသိစိတ် (အလွန်အမင်းစိတ်ခံစားမှုနှင့် Impulses သတင်းပို့၏ထိန်းချုပ်, ဖွဲ့စည်း, အားကိုး; = 0.79 α) ။
attachment ။ ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်မူရင်းမေးခွန်းလွှာအကဲဖြတ်ပူးတွဲဖိုင်ကို [36 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်62] [63စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း:] နှစ်ခုအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်။ သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှု 0.84 နှင့် 0.86 အကြားကွဲပြား, မြင့်မားသည်။ Lafontaine et al ။  ပူးတွဲမေးခွန်းလွှာတစ်ခု abridged ဗားရှင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာဆယ်ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ Cronbach ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတိုင်းအတာအဘို့အ alpha ကိန်းတန်ဖိုးများ (α = 0.86) နှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအတိုင်းအတာ (α = 0.85) လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစိတ်ကျေနပ်မှု။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် Dyadic ညှိယူစကေး (Das, Spanier [၏တိုတောင်းတဲ့လေးကို item ဗားရှင်းနဲ့အကဲဖြတ်ခဲ့သည်65]), Sabourin, Valois နှင့် Lussier ကတီထွင်  ။ Sabourin et al ။  သ abridged ဗားရှင်းဒုက္ခရောက်နေနှင့်ပျော်ရွှင်စုံတွဲများအကြားကွဲပြားခြားနားသွားအတွက်မူရင်း 32-item ကိုဗားရှင်းအဖြစ်နည်းတူထိရောက်သောကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ abridged ဗားရှင်းပစ္စုပ္ပန်နမူနာတစ်ခုလုံလောက်သောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.84) ရှိခဲ့ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုငါးခုပစ္စည်းများနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ် (ဥပမာ, "သင့်လက်ရှိမိတ်ဖက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမျိုးစုံနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါသလား?" "သင်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့လိင်ဘဝကိုကျေနပ်မှုရှိပါသလား") ခြောက်မှတ် Likert စကေးအပေါ် rated Nowinsky နှင့် Lopiccolo ကတီထွင်  ။ 0.93 ရောက်ရှိငါးပစ္စည်းများကိုအဘို့အ Cronbach ရဲ့ alpha ကိန်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များ။ သူတို့လူကြီးဆိုဒ် (အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ-လိင်အင်္ဂါ, ရင်သား, ဒါမှမဟုတ်တင်ပါးနှင့် / သို့မဟုတ် XXX ကဗီဒီယိုတွေကို-လိင်, cunnilingus, fellatio, စအိုလိင်ဆက်ဆံ, etc.- သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနစ်မှတ်စကေးအပေါ် rated တစ်ခုမှာကို item ဖြေဆိုသူကိုမေးမြန်း လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်း 18 အသက်ကျော်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး) ၏ (1 နေ့တိုင်း =7ရန်မ =) ။
ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်။ တစ်ဦး dichotomous စကေးအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးကပစ္စည်းများစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာဖောက်ပြန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကဲဖြတ်ရန်တီထွင်ခဲ့ကြသည်: သင်တည်ငြိမ်သောစုံတွဲဆက်ဆံရေးအတွက်စဉ် 1) "သငျသညျအစဉျအမွဲကအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသလား (ဥပမာ, seductive ပြုမူချီးမွမ်းပေးထားခြင်း, ချစ်ခြင်း၏ခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရ) "2)" သင်ကတည်ငြိမ်စုံတွဲဆက်ဆံရေးအတွက်စဉ်သငျသညျအစဉျအမွဲကအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖလှယ်မှုခဲ့ဖူးပါသလော "(ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကိုလိင်သူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်စောင့်ကြည့်) ။ အဆိုပါပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုကိန်း KD = 0.56 ဖြစ်ခဲ့သည်။
တဦးတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပိုကောင်းသင်တန်းသားများကိုဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်သတ်မှတ်ပုံကိုနားလည်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ခြောက်လအခြေအနေတွေတင်ပြခဲ့ကြသည်နှင့်သင်တန်းသားများကိုဖောက်ပြန်၏လုပ်ရပ်ဖော်ပြထားသောသူတို့ကိုရွေးဖို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်: အရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းတိုက်ရိုက်ချက်တင်ကနေတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်, webcam ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဖလှယ်မှုရှိခြင်း, webcam မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖလှယ်မှုရှိခြင်း, လူကြီး site ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့် webcam ကနေတဆင့်ကျဘာရှိခြင်း။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ ရလဒ် ၃၅.၆% (n = ၂၇၇) သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်ကိုတစ်ခါမျှမရောက်ဖူးကြောင်း၊ ၁၅.၈% (n = 35.6) တစ်ကြိမ်သာရောက်ခဲ့ပြီး ၁၂.၁% (n = ၉၄) သည်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ထွက်သွားသည်၊ ၆.၈% (= = ၅၃) တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်၊ တစ်ပတ်လျှင် ၁၁.၂% (= = ၈၇)၊ တစ်ပတ်လျှင် ၁၆.၃% (n = 277) ။ ၂.၃% သာလျှင် (n = 15.8) အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်များကိုနေ့တိုင်းလည်ပတ်ခဲ့သည် အဆိုပါ t-test ကိုရလဒ်များ (t (123) = 12.1, p <94) ယောက်ျား (M = 6.8, SD ကို = 53) အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုမကြာခဏအရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ (M = 11.2, SD ကို = 87) သွားရောက်ခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားမှာ 16.3 (Cohen's d) ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အားကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ သစ္စာမဲ့သည့်အပြုအမူများကိုဖော်ပြသည့်အခြေအနေခြောက်ခုအနက်မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရွေးချယ်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၂.၁% (n = 127) အရွယ်ရောက်သူများ၏ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်း၊ ၃၀.၃% (n = ၂၃၆)၊ တိုက်ရိုက် chat မှတစ်ဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖလှယ်ခြင်းအတွက် ၈၂.၉% (n) ဝက်ဘ်ကင်မရာမှတဆင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်၊ ၆၆.၉% (= = ၅၉၉) ကိုဝက်ဘ်ကင်မရာမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်၊ ၂၇.၃% (2.3 = ၂၁၃)၊ အရွယ်ရောက်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါဝင်ခြင်းအတွက် (၃၃.၁%) (= = ၇၀၂) ဝက်ဘ်ကင်မရာမှတဆင့် cybersex ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, ပူးတွဲမှု, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်, စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား bivariate ဆက်စပ်မှုအတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 1.
အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်ဓမ္မဒေသနာ, Rucker နှင့်ဟေးယက်စသဖြင့်အဆိုပြုထားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် အခြေခံ. စေ့စပ်ဖြန်ဖြေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  ။ အဆိုပါမော်ဒယ် per-) သင်တန်းသားများကို '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် 1 အကြားဆက်ဆံရေးပြုပြီဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော sequential ဖျန်ဖြေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်
စားပွဲတင် 1 ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, relational နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို (ဎ = 779) အကြားဆက်စပ်မှု။
မှတ်စု: အက်စ်အက်စ် = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ SC = စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှု။ * p <0.05 ။ ** p <0.01 ။
sonality နှင့်ပူးတွဲမှု (exogenous variable တွေကို), နှင့် 2) စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု (မှီခိုသို့မဟုတ် endogenous variable တွေကို) ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ် Mplus သုံးပြီးခန့်မှန်းခဲ့သည်  ။ အဆိုပါပျောက်ဆုံးဒေတာကိုတတ်နိုင်သမျှကုန်ကြမ်းဒေတာကို အသုံးပြု. မော်ဒယ်ရဲ့ parameters များကိုခန့်မှန်းရန်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုအသုံးပြုရသောအပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း (FIML), [သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်70] ။ သုံးညွှန်းကိန်းမော်ဒယ်ရဲ့မထိုက်မတန်အတည်ပြုရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်: အနှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI), အ Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း (TLI), နှင့်အမြစ်အကြမ်းဖျင်း (RMSEA) ၏တစ်စတုရန်းအမှားဆိုလို။ Hoyle  .90 နှင့် .95 အထက်တစ် CFI နှင့် TLI အသီးသီးဒေတာမှတစ်ကျေနပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မထိုက်မတန်ညွှန်ပြခြင်း, .08 ညီမျှသို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့ RMSEA တန်ဖိုးများ [လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး72] ။
အဆိုပြုထားဖျန်ဖြေမော်ဒယ်ညွှန်းကိန်း variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေး၏သီအိုရီမော်ဒယ်ဒေတာမှကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန် (χခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ2(3) = 1.547, p = 0.67, CFI = 1.00, TLI = 1.02, RMSEA = 0.000 [95% CI = 0.000, 0.047]) ။ ဘက်လိုက်မှု - တည့်မတ်သောယုံကြည်မှုကြားကာလများတည်ဆောက်ရန် Bootstrap နည်းလမ်းသည် (မူလနမူနာမှအစားထိုး ၅၀၀၀ ကျပန်းနမူနာများကို အသုံးပြု၍) သွယ်ဝိုက်သောသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောသက်ရောက်မှုများ၏အရေးပါမှုကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားလုံးသက်ရောက်မှု p <5000 မှာသိသာခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ပုံ 1 neuroticism, အသိစိတ်, ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ရှောင်ရှားတိုက်ရိုက်စုံတွဲမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပြသထားတယ်။ ရှောင်ရှားခြင်းလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာရှောင်ရှားခြင်းဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှတဆင့်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကရှင်းပြသည်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် (စုစုပေါင်းတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု) မှတဆင့်။
တွေးဆအမျှသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများဆန်းစစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်စုံတွဲသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုရှင်းပြမပြုခဲ့ကြောင်းပြသ; အစား, အကြားဆက်ဆံရေးဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အနိမ့် neuroticism မြင့်မားပွင့်လင်း, အနိမ့်အသိစိတ်, မြင့်စိုးရိမျသို့မဟုတ်ရှောင်ကြဉ်ပါပူးတွဲဖိုင်ကိုညစ်ညမ်းကရှင်းပြခဲ့သည်
ပုံ ၁။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ချိတ်ဆက်မှုမလုံခြုံမှု၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှု၊ သာသိသာထင်ရှားသော (p <1) စံချိန်စံညွှန်းမီဆုတ်ယုတ်ကိန်း (β) တင်ပြနေကြသည်။ exogenous variable တွေကိုအကြား covariance ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ဤအ variable တွေကိုအကြားလင့်များပုံကိုရိုးရှင်းဖို့တင်ပြကြသည်မဟုတ်။
အလှည့်ထဲမှာစုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်, ခန့်မှန်းထားတဲ့အသုံးပြုမှု။ ဒုတိယသွယ်ဝိုက်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းစုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်, နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့, မော်ဒယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်သီးခြားစီခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ရလဒ်များလိင် (ဂဖြတ်ပြီးသိသိသာသာခြားနားချက်ပြသ2 (6) = 56.38, p = 0.007) ။ ယောက်ျားအတွက်မော်ဒယ်ရဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေညွှန်းကိန်း variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေး၏သီအိုရီမော်ဒယ်ဒေတာမှကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန် (χခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ2(2) = 0.64, p = 0.73, CFI = 1.00, TLI = 1.11, RMSEA = 0.000 [95% CI = 0.000, 0.088]) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသာအနိမ့်အသိစိတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အနိမ့်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့သည်။ attachment-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းလည်းအပြုသဘောဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောမခံခဲ့ရပါ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပြုသဘောဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ဖို့ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်အဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်သာအနုတ်လက္ခဏာစုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့သည်။ ကှဲလှဲရှင်းပြခဲ့၏ရာခိုင်နှုန်းအလယ်အလတ်မှသေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်: ညစ်ညမ်း = 5%, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် = 10%, အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု = 30% နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု = 16% ကြည့်ရှု။
အမျိုးသမီးတွေအတွက်မော်ဒယ်ရဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေညွှန်းကိန်း variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေး၏သီအိုရီမော်ဒယ်ဒေတာမှကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန် (χခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ2(2) = 4.91, p = 0.09, CFI = 0.996, TLI = 0.931, RMSEA = 0.05 [95% CI = 0.000, 0.114]) ။ မော်ဒယ်ရဲ့ variable တွေကိုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးခြောက်လအသင်းအဖွဲ့များ မှလွဲ. အားလုံးသင်တန်းသားများအပါအဝင်မော်ဒယ်အတွက်သူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်။ အထွေထွေမော်ဒယ်အတွက်ကြောင့်အပြုသဘောဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ဖို့ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ် attachment-related စိုးရိမ်စိတ်အပြုသဘော, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ attachment-related ရှောင်ရှားခြင်းမရှိတော့သိသိသာသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာအထွေထွေမော်ဒယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်ခဲ့စဉ်အမျိုးသမီးများ extroversion အဆိုး, သူတို့ရဲ့စုံတွဲကျေနပ်မှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အားလုံးပါဝင်သူများပါဝင်တဲ့စံပြအတွက်ကြောင့်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေစဉ် Neuroticism အဆိုး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြားရဲ့ neuroticism နှင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထို့အပွငျအမြိုးသမီးမြားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပြုသဘောမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့အထွေထွေမော်ဒယ်ထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ ကှဲလှဲကရှင်းပြသည်အလယ်အလတ်မှသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်: ညစ်ညမ်း = 12%, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် = 10%, အိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု = 39% နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု = 23% ကြည့်ရှု။
အတော်များများကသုတေသီများနှင့် Clinician စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ တချို့က [ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ26]  ပူးတွဲမှုအပေါ်အခြားသူတွေ  လိင်  ပဋိပက္ခများ, အကြမ်းဖက်မှု, ကတိကဝတ်မရှိခြင်း  နဲ့တခြား variable တွေကို။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ, အထူးသညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ပတျဝနျးကငျြနယူးအပြုအမူတွေ, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှု, နှင့်ဆက်စပ်ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သစ်ကိုရှင်းလင်းမော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှတဆင့်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဤရွေ့ကားမူရင်းတွေ့ရှိချက်ဖောက်ပြန်၏ "ခေတ်သစ်" ပုံစံများ၏တည်ရှိမှုအတည်ပြုပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများ [ဤအကို virtual ဆက်ဆံရေးစုံတွဲစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခု "စစ်မှန်သော" ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွန်ကျူးခြင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသစ္စာဖောက်ကိုယ်စားပြုကြဘူးကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်55] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်မူလဒေတာကိုဆန့်ကျင်ဖို့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးမူကွဲရှင်းပြရှုပ်ထွေးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကွင်းဆက်တစ် key ကိုလင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောသုတေသီများပြီးသားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု [In-လူတစ်ဦး extradyadic လိင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွါးကြောင်းပြသကြပေမယ့်5]   ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်အခြားဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နှင့် In-လူတစ်ဦးဖောက်ပြန်ကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ webcam ကနေတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖလှယ်မှုမှ chat အသက်ရှင်ရန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်တစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်ပြင်းထန်မှုအတွက်ကွဲပြားပေလိမ့်မည်။ ဒီအဆုံးမှအနာဂတ်သုတေသနအွန်လိုင်းအခြေအနေများဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအမျိုးမျိုးသောနားလည်ရန် (အီးမေးလ်, လူမှုကွန်ယက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ, etc) ခြုံငုံကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
Path ကိုမော်ဒယ်ရလဒ်များကိုအထူးသဖြင့် neuroticism, ရငျးနှီးရှောင်ရှားခြင်းနှင့် sequential ဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့, အတော်ကြာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်ဆံရေးဖော်ပြခဲ့တယ်။ အမြင့် neuroticism အနိမ့်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ neuroticism ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ၎င်း၏အနုတ်လက္ခဏာဆက်ဆံရေးမျိုးကတဆင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ဖို့သွယ်ဝိုက်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလှည့်မှာတော့ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် [neuroticism ပြင်းပြင်းထန်ထန်စုံတွဲမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြု26]   ။ [Egan နှင့် Parmer မှသို့သော်ဆန့်ကျင်28] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအနိမ့် neuroticism ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတည်ငြိမ်ပြီးထားကြ၏-ကျောတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လေ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုကောင်းဒီအပြန်အလှန်ရလဒ်နားလည်ရန် neuroticism ဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံအကဲဖြတ်ဘို့ကြိုးစားကြသည်သင့်ပါသည်။ အနိမျ့အသိစိတ်ကိုလည်း Egan နှင့် Parmer အားဖြင့်တွေ့ရှိချက်ကိုထောက်ပံ့သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိလေ့လာမှုညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီမှကန့်သတ်မဟုတ်ခဲ့ကတည်းကသို့သော်သတိထားကျင့်သုံးရပါမည်။ သင်တန်းသားများကိုသာ 2.3% နေ့တိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ Widiger နှင့် Mullins-Sweatt [ခြင်းဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခု76] အနိမ့်အသိစိတ်ကိုမကြာခဏစနစ်တကျနှင့်ပေါ့ဆခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းပြပြီး, အသိစိတ်၏အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့် Impulse နှင့်ပေါ့ဆမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အနိမ့်အသိစိတ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်း deviant သို့မဟုတ် compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြပေလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပွင့်လင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Emmers-Sommer et al ဤရလဒ်များကိုထောက်ခံကြောင်းတွေ့ရှိချက်။ , ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူရောက်လာသောအခါလျော့နည်းရှေးရိုးစွဲ ရှိ. , ကောင်းကင်ဘုံ et al တွေ့သောသူ။  တက်ကြွစိတ်ကူးစိတ်သန်းညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိသောသူ။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု [Non-သမားရိုးကျသိချင်စိတ်ကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့စရိုက်များ, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်လက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များအားဖြင့်ရှင်းပြဟန်76] ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက extroversion [ယခင်လေ့လာမှုများပြုလုပ် social networking site များအသုံးပြုကြသောတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦး defining အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြခဲ့ကြသော်လည်း, ပစ္စုပ္ပန်မော်ဒယ်တစ်ဦးသိသိသာသာရိုမဟုတ်ခဲ့77]   အပြုအမူ sexting  extramarital ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်  ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။
ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ကိုလည်းပူးတွဲဖိုင်ကိုမလုံခြုံမှုများကရှင်းပြခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ [ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ရှောင်ရှားအဆိုးစုံတွဲမကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုခန့်မှန်းကြောင်းကိုထူထောင်ခဲ့ကြ33] ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးပြုပြီ-ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နှင့်ညစ်ညမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်ကတိကဝတ်တစ်ခုမရှိခြင်းအဖြစ်ကိုရှောင်ရှားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘုံများမှာနှစ်ဦးစလုံး၏အခြားရွေးချယ်စရာဆက်ဆံရေးကို, ထွက်ရှာတဲ့အလိုဆန္ဒထင်ဟပ်အသုံးပြုမှု-နိုင်ပါသည်။ အကြံပြု ကျနော်တို့နွေးထွေးမှုကိုရှောင်ကြဉ်တစ်ဦးချင်းစီတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်ကြောင်းယူဆလျှင်ထို့ပြင်ကြောင့် Mikulincer နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မှကြွလာသောအခါ  [ကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ repertoire ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာအကြံပြုခဲ့ကြ35] ။ ဤအခွအေနမြေားတှငျ, အင်တာနက်ကိုကတိကဝတ်များ၏ပုံစံအားလုံးကိုထံမှရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးချင်းစီကာကှယျဖို့, လုံခြုံအာကာသဖြစ်လာသည်။
ပူးတွဲဖိုင်ကို-related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးဟာ [စုံတွဲစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကိုမလုံခြုံမှုအပေါ်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများပေးထား, အံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့33] ။ ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နေတဆင့်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားသွယ်ဝိုက်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. In-လူတစ်ဦးဖောက်ပြန်အာရုံစိုက်အများအပြားလေ့လာမှုများပြီးသား [နှစ်ခု variable တွေကို related ဖြစ်ကြောင်းပြသကြ32]    ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပူးတွဲစနစ်၏ activation မတ်ေတာအတှကျစိုးရိမျတစ်ဦးချင်းစီ '' လိုအပ်ကျေနပ်အောင်ရာကို virtual စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, များအတွက်အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလှည့်တွင်ဤအတွေ့အကြုံများစုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုရှိသည်။ ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှတဆင့်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးအတွက်ချို့တဲ့သောအာမခံထွက်ရှာကြာလော့။ ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်မှတဆင့်လုံခြုံရေးအဘို့မိမိတို့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းစိတ်ခံစားမှုစိုးရိမ်တစ်ဦးချင်းစီကျေနပ်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်သုတေသနဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ပူးတွဲမှု, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နှင့်စုံတွဲနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားရှိကွဲပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားဆက်ဆံရေး၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့သဘောသဘာဝနှင့်အစွမ်းသတ္တိ။ အဆိုပါကျားမပေါ်မူတည်ပြီး, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်ပူးတွဲမှုနှငျ့ပတျသကျသောဆက်ဆံရေးကိုတစ်ခါတစ်ရံလျော့နည်းသိသိသာသာဖြစ်လာသို့မဟုတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ အလားတူပဲ, ကျားမအပေါ်မူတည်ပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏လမ်းကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြတ်သန်းမယ်လို့သို့မဟုတ်လုံးဝဒီအဆင့်ကိုကျော်သွား။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် 1) ကို attachment နဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် 2) စုံတွဲနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား link ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယောက်ျားအဘို့, ဒါပေမယ့်အပြုသဘောမိန်းမတို့အဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဆိုးဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ခြားနားချက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရပါမည်။ တခြားလေ့လာမှုလည်း [ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးရဲ့အသုံးပြုမှုကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကျိုးရှိစေခြင်းငှါပြခဲ့ကြ1]  ။ ဤရလဒ်သည်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှတဆင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကျေနပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Emmers-Sommer et al ။  အမျိုးသမီးတွေအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုခဲ့ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု enriches နှင့်စုံတွဲရငျးနှီးမှုတိုးပွါးပြသခဲ့ကြသည်။ လူတို့သညျတှငျ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ဆွနှင့်ဆန္ဒပြည့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်စုံတွဲအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားကျား, မကွဲပြားမှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်လှုံ့ဆျောမှု၏ကွဲပြားပုံစံများထုတ်ဖေါ်နိုင်တယ်: ယောက်ျားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့မိမိတို့လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့ရှာအံ့သောငှါအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့ရှာအံ့သောငှါ  ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည့်တွန်းအားတစ်ခုနှံ့နှံ့စပ်စပ်စာမေးပွဲကဒီအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအကောင့်သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဆက်စပ် variable တွေကိုယူပြီး, ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍလင်းဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ ရလဒ်ပြန်ဆိုသည့်အခါသို့သော်လေ့လာမှုများ၏ Cross-Section သဘာဝပေးသော, သတိပြုဖို့လိုကျင့်သုံးရပါမည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများမင်းသား-မိတ်ဖက်အလှနျမှီခိုမော်ဒယ် (APIM သုံးပြီး longitudinal ဒီဇိုင်းများကိုစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ။ , Kenny et al ) ပိုကောင်းတဲ့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ variable တွေကိုတို့တွင်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခမြားနှငျ့ ပတျသကျ. အနာဂတ်သုတေသနညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်၏အခင်းအကျင်းဆနျးစစျ, သူတို့သည်အကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်စုံတွဲများ၏အကျိုးဆက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုဖွဲ့စည်းရှိမရှိရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာစုဆောင်းမှုမဟာဗျူဟာလေ့လာမှုကန့်သတ်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ နမူနာ၏အခြားမျိုးမော်ဒယ်များယဘေုယမှအကဲဖြတ်ရပါမည်။
နောက်ထပ်န့်အသတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန် variable တွေကိုများ၏စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဖောက်ပြန်၏အဓိပ္ပါယ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ တချို့ကသင်တန်းသားများကိုအခြားသူများအားမစဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဖောက်ပြန်၏လုပ်ရပ်ခဲ့ကြောင်းဆင်ခြင်၏။ ထို့အပွငျပစ္စည်းများကိုအနိမ့်ယုံကြည်စိတ်ချရပေးအပ်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုကောင်းဥပမာ, တိကျသောအမူအကျင့်ညွှန်းကိန်း (ဥပမာ, သူတို့ကို seducing ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်း complimenting) အပါအဝင်ခွငျးအားဖွငျ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖောက်ပြန်သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ လေ့လာရေးကိုလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်အကြား link ကို၏သဘောသဘာဝရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ထို့အပြင်တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံစေ့စပ်အကဲဖြတ်  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုမွမ်းမံခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ အနိမ့် neuroticism အန္တရာယ်နှင့်ရူးမေ့မေ့လျော့လျော့ညွှန်ပြနေချိန်တွင်ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်သော neuroticism ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအစွန်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့လာအကဲဖြတ် (ဥပမာလိင်စွဲလမ်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များ, compulsive မြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ, စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်) မသက်ဆိုင်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးချင်းစီ '' အကြိမ်ရေများ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနောက်ကွယ်ကတွန်းအားတစ်ခုပိုကောင်းနားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, Clinician [တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးတိုးပွားလာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်အခက်အခဲများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အကူအညီနဲ့ထွက်ရှာကြသည်သတင်းပို့5]   ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဆကျဆံရေးကိစ္စများ [မြင့်တက်ဖြစ်ဟန်53] ။ စုံတွဲများ [သူတို့ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတည်ထောင်နိုင်မီဖောက်ပြန်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်49] ။ ကုသ [ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အင်တာနက်အရေးပါပုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်, ဒီလိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ဖောက်ပြန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်အပြုအမူတွေ, သတိထားရပါမည်84] ။ အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေရိုးရှင်းသောအွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးကနေ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့, ဆိုက်ဘာစွဲအထိတစ်ဦးစဉ်ဆက်အပေါ်အကဲဖြတ်ရပါမည်  ။ ထိုကဲ့သို့သော Rosenberg ကနှင့် Krauss အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတအဖြစ်လုံလောက်သောအကဲဖြတ် tool ကို , (စသည်တို့ကို, ပျော်စရာရှိသည်ဖို့, ပျင်းသက်သာရာရစေဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့ချဖို့, ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးသင်ယူဖို့) တစ်ဦးချင်းစီ '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနောက်ကွယ်ကအမျိုးမျိုးသောတွန်းအားဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေလိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးခဝါသည်နားလည်မှုရရှိမှုအသုံးပြုပုံဆိုက်ဘာဖောက်ပြန်ပိုကောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဆိုက်ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အရှင်စုံတွဲမကျေနပ်မှုရှောင်ရှားရန်လုပ်ရပါမည်။
Ferron, အေ, Lussier, Y. , Sabourin, အက်စ်နှင့် Brassard, အေ (2017) Personality, နှောင်ကြိုးများနှင့်လင်မယားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားအစည်းအရုံးများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုက်ဘာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၏အခန်းက္ပ။ လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 6, 1-18 ။ http://dx.doi.org/10.4236/sn.2017.61001
1. တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွ Maddox, Am, Rhoades, GK နှင့် Markman, HJ (2011) Views လိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အတူအသင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 441-448 ။
https://doi.org/10.1007/s10508-009-9585-4 [ကိုးကားအချိန် (s): 6]
2. Poulsen, fo, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, DM နှင့် Galovan, Am (2013) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ဒါဟာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မည်သို့ဒါဟာလင်မယားရလဒျနှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုအဘယ်သူ။ လိင်သုတေသန 50 ၏ဂျာနယ်, 72-83 ။
https://doi.org/10.1080/00224499.2011.648027 [ကိုးကားအချိန် (s): 4]
3. Cooper က, အေ, Delmonico, DL နှင့် Burg, R. (2000) ကျဘာအသုံးပြုသူများ, ချိုးဖောက်မှုများနှင့် compulsive: နယူးတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 5-29 ။
https://doi.org/10.1080/10720160008400205 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
4. ကာရိုး, JS, Padilla-Walker က, LM, နယ်လ်ဆင်, LJ, Olson, CD, Barry, CM နှင့် Madsen, SD က (2008) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်လွန်မြောက်လူကြီးများအကြားကိုသုံးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသန 23 ၏ဂျာနယ်, 6-30 ။
https://doi.org/10.1177/0743558407306348 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
5. Doran, K. နှင့်စျေး, ဂျေ (2014) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အိမ်ထောင်ရေး။ မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးကိစ္စများ, 35, 489-498 ၏ဂျာနယ်။
https://doi.org/10.1007/s10834-014-9391-6 [ကိုးကားအချိန် (s): 7]
6. တောအတွင်း America Online ထဲမှာမစ္စအောလ်ဘရိုက်, JM (2008) လိင်: အင်တာနက်ကရှာ၎င်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများအတွက်တစ်ဦးလိင်၏ရှာဖွေရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထား။ လိင်သုတေသန 45 ၏ဂျာနယ်, 175-186 ။
https://doi.org/10.1080/00224490801987481 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
7. ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ Drake, RE (1994) နိုင်သည့်အလားအလာ, ကနျြးမာရေးဘေးအန္တရာယ်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများအားဖြင့် Viewed အဖြစ်။ စိတ်ရောဂါသူနာပြု, 8, 101-106 ၏မော်ကွန်း။
https://doi.org/10.1016/0883-9417(94)90040-X [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
8. Manning, J. (၂၀၀၆) အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေ၏သက်ရောက်မှု - သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 2006, 13-131 ။
https://doi.org/10.1080/10720160600870711 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
9. Stewart က, DN နှင့် Szymanski တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု DM (2012) လူငယ်လူကြီးအမျိုးသမီးများနေ့အစီရင်ခံစာများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 67, 257-271 ။
https://doi.org/10.1007/s11199-012-0164-0 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
10 ။ နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲများတစ်ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ Daneback, K. , Traeen, ခနှင့် Mansson, SA (2009) ကိုအသုံးပြုပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 38, 746-753 ။
https://doi.org/10.1007/s10508-008-9314-4 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
11 ။ Bridges, AJ နှင့် Morokoff, PJ (၂၀၁၁) လိင်ဆိုင်ရာစုံတွဲများတွင်လိင်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး, 2011, 18-562 ။ [ကိုးကားစရာအချိန် - ၄]
12 ။ စုံတွဲများကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက် Willoughby, BJ, Carroll, JS, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, DM နှင့်ဘရောင်း, CC ကို (2015) ကွာခြားချက်များ: အသင်းကျေနပ်မှု, တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45, 145-158 ။
https://doi.org/10.1007/s10508-015-0562-9 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
13 ။ Yucel, D. နှင့် Gassanov, MA (၂၀၁၀) အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများအကြားလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်နှင့်ပါတနာဆက်စပ်မှုများကိုလေ့လာခြင်း။ လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသန, 2010, 39-725 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
14 ။ Mulhall, ဂျေ, ဘုရင်, R. , Glina, အက်စ်နှင့် Hvidsten, K. (2008) ၏အရေးပါမှုနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး Worldwide ၏ကြားတွင်လိင်နှင့်အတူကျေနပ်မှု: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သာ. ကောင်း၏လိင်စစ်တမ်း၏ရလဒ်များ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 5, 788-795 ။
https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00765.x [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
15 ။ Ciclitira, K. (၂၀၀၂) အပြာစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကိုသုတေသနပြုသည်။ စိတ်ပညာရှင်, 2002, 15-191 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
16 ။ Gagnon, JH (1999) က Les des script များ dans Les recherches sur la sexualité [လိင်အပေါ်သုတေသနအတွက်အမြင် Scripts ၏အကဲဆတ်နှင့် Implicit အသုံးပြုမှု] ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ et သွယ်ဝိုက် de la ရှုထောင့်သုံးစွဲမှု။ Actes de la recherche en သိပ္ပံလူမှုရေး, 128, 73-79 ။
https://doi.org/10.3406/arss.1999.3515 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
17 ။ Laumann, EO နှင့် Gagnon, JH (1995) လိင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ် ဦး ကလူမှုဗေဒအမြင်။ ခုနှစ်တွင်: Parker, RG နှင့် Gagnon, JH, Eds, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conceiving: Postmodern ကမ်ဘာပျေါတှငျလိင်သုတေသနမှချဉ်းကပ်, Routledge, New York, 183-214 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
18 ။ မာစတာ, NT, Casey, အီး, ဝဲလ်, EA ၏နှင့် Morrison, DM (2013) Young ကလိင်ကွဲ Active ကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Scripts: အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်း။ လိင်သုတေသန 50 ၏ဂျာနယ်, 409-420 ။
https://doi.org/10.1080/00224499.2012.661102 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
19 ။ Shaughnessy, K. , Byers, S. နှင့် Thornton, SJ (2011) Cybersex ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ လိင်ကွဲကျောင်းသားများ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 23, 79-89 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
20 ။ Young ကလိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုအတွက် Hald, GM က (2006) ကျားကွာခြားချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 35, 577-585 ။
https://doi.org/10.1007/s10508-006-9064-0 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
21 ။ Hald, GM နှင့် Mulya, TW (2013) အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်ကျောင်းသားများအတွက်အပြာစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လက်မထပ်ဘဲလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်၊ ၁၅၊ ၉၈၁-၉၉၆ ။
https://doi.org/10.1080/13691058.2013.802013 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
22 ။ မော်ဂန်, EM (2011) အသင်းလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏လူငယ်လူကြီးများ '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင် Preferences ကို, အပြုအမူများနှင့်ကျေနပ်မှုအကြား။ လိင်သုတေသန 48 ၏ဂျာနယ်, 520-530 ။
https://doi.org/10.1080/00224499.2010.543960 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
23 ။ Goodson, P. , McCormick, D. နှင့် Evans, A. (၂၀၀၀) အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင် - အွန်လိုင်းမှလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်ခြင်း။ လိင်ပညာရေးနှင့်ကုထုံး၏ဂျာနယ်, 2000, 4-252 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
24 ။ Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ နှင့် Pargament, KI (2015) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း - ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာ၏အတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။
https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.842192 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
25 ။ Rosenberg က, အိပ်ချ်နှင့် Kraus, အက်စ် (2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, သုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဘို့တဏှာနှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက် "စိတ်အားထက်သန်မှုနှောင်ကြိုး" ၏ဆက်ဆံရေး။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39, 1012-1017 ။
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.02.010 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
26 ။ Malouff, JM, Thorsteinsson, eb, Schutte, NS, Bhullar, N. နှင့် Rook, SE (2010) Intimate အပေါင်းအဖေါ်များ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု၏ငါး-Factor မော်ဒယ်: တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်သုတေသနဂျာနယ်, 44, 124-127 ။
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.09.004 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
27 ။ Fisher သည် TD နှင့် McNulty, JK (2008) Neuroticism နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကျေနပ်မှု: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ကစားဖြန်ဖြေအခန်းက္ပ။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 22, 112-122 ။
https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.112 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
28 ။ Egan, V. နှင့် Parmar, R. (2013) ညစ်ပတ်အလေ့အထများ? အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။
https://doi.org/10.1080/0092623X.2012.710182 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
29 ။ ကောင်းကင်ဘုံသည်, PL, Crocker, ဃ, Edwards က, ခ, Preston, N. , ရပ်ကွက်, R. နှင့် Woodbridge, N. (2003) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လိင်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 35, 411-419 ။
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00203-9 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
30 ။ Emmers-Sommer, T. , Hertlein, K. နှင့် Kennedy, A. (2013) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သဘောထားများ - ကျားမအကြားနှင့်အတွင်းရှိလိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၄၉၊ ၃၄၉-၃၆၅ ။
https://doi.org/10.1080/01494929.2012.762449 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
31 ။ Shackelford, TK, Besser, A. နှင့် Goetz, AT (2008) Personality, Martial စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များသုတေသန, 6, 13-25 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
32 ။ "Other က Man / အမျိုးသမီး" Is သူကားအဘယ်သူ: Weiser, DA နှင့် Weigel, DJ သမား (2015) ကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း Partner ၏အတွေ့အကြုံများစုံစမ်းစစ်ဆေး? ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 85, 176-181 ။
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.014 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
33 ။ Mikulincer, M. နှင့် Shaver, PR (၂၀၁၀) လူကြီးဘဝတွင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒိုင်းနမစ်နှင့်ပြောင်းလဲမှု။ Guilford စာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်။ [ကိုးကားချိန် - ၆]
34 ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားကုထုံးကိုရှာဖွေနေသည့်စုံတွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုကိုခန့်မှန်းရသော Brassard, A. , Péloquin, K. , Dupuy, E. , Wright, J. နှင့် Shaver, PR (၂၀၁၂) Romantic Attachment မလုံခြုံမှုဟောကိန်းထုတ်သည်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 2012, 38-245 ။
https://doi.org/10.1080/0092623X.2011.606881 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
35 ။ Szymanski, Romantic ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်လူငယ်လူကြီးလိင်ကွဲအမျိုးသားများအပေါ် DM နှင့် Stewart က-Richardson က DN (2014) စိတ်ဓာတ်, ဆက်ဆံရေး, နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Correlate ။ အဆိုပါအမျိုးသားများရဲ့လေ့လာရေးဂျာနယ်, 22, 64-82 ။
https://doi.org/10.3149/jms.2201.64 [ကိုးကားအချိန် (s): 4]
36 ။ လင်မယားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် Mikulincer, အမ်, Florian, V. , Cowan, PA နှင့် Cowan, က CP (2002) နှောင်ကြိုးများကိုလုံခြုံရေး: စနစ်တစ်ခုမော်ဒယ်နှင့်မိသားစု Dynamics ကိုများအတွက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မိသားစုလုပ်ငန်းစဉ်, 41, 405-434 ။
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41309.x [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
37 ။ Davis က, ဃ, မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, PR စနစ်နှင့် Vernon, ML (2004) နှောင်ကြိုးစတိုင်နှင့်ဘာသာရပ်လှုံ့ဆော်လိင်အဘို့။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 30, 1076-1090 ။
https://doi.org/10.1177/0146167204264794 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
38 ။ Schachner, DA နှင့် Shaver, PR (2004) Attachment Dimensions and Sexual Motors ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး, 11, 179-195 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
39 ။ အဆိုပါလိင်-နှောင်ကြိုး Link ကိုအပေါ် Dewitte, အမ် (2012) အမျိုးမျိုးပတ်သ က်. : တစ်ခု Emotion-လှုံ့ဆော်အကောင့်ဆီသို့။ လိင်သုတေသန 49 ၏ဂျာနယ်, 105-124 ။
https://doi.org/10.1080/00224499.2011.576351 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
40 ။ DeWall, CN, et al ။ (2011) ဒါ Far Away One ရဲ့ Partner ကနေ, သို့သျောလညျးရိုမန်းတစ်အစားထိုးရန်ဒါပိတ်: ကိုရှောင်ကြဉ်နှောင်ကြိုး, အစားထိုးအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 101, 1302-1316 ။
https://doi.org/10.1037/a0025497 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
41 ။ ငါး, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းများတွင်ပါသူကားအဘယ်သူသူများသည်၏ဖြစ်မှု, Pavkov, TW, Wetchler, JL နှင့် Bercik, ဂျေ (2012) လက်ခဏာ: Extradyadic အတွေ့အကြုံများအတွက်အရွယ်ရောက်နှောင်ကြိုးများနှင့်ခြားနားခြင်း၏အခန်းက္ပ။ မိသားစုကုထုံး, 40 ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 214-229 ။
https://doi.org/10.1080/01926187.2011.601192 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
42 ။ စယ်, V. , Baker က LR နဲ့အိမ်ထောင်ရေးအတွက် McNulty, JK (2013) နှောင်ကြိုး Insecurity နှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း: ချိန်းတွေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ Do လေ့လာရေးတကယ်အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းကိုကြှနျုပျတို့ကိုအသိပေး? မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 27, 242-251 ။
https://doi.org/10.1037/a0032118 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
43 ။ Allen က, ES နှင့် Baucom, DH (2004) အရွယ်ရောက်နှောင်ကြိုးများနှင့် Extradyadic ပါဝင်ပတ်သက်မှုပုံစံများ။ မိသားစုလုပ်ငန်းစဉ်, 43, 467-488 ။
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2004.00035.x [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
44 ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှောင်ကြိုး၏နန်, ka နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, PR စနစ် (1995) အရွယ်အစား, စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်ရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 21, 267-283 ။
https://doi.org/10.1177/0146167295213008 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
45 ။ Sharpsteen, DJ နှင့် Kirkpatrick, LA (1997) Romantic Jealousy နှင့် Adult Romantic Attachment ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 72, 627-640 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
46 ။ Stack, အက်စ်, Wasserman, ဗြဲနှင့် Kern, R. (2004) အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူမှုနှောင်ကြိုးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှု။ လပတ်လူမှုသိပ္ပံ, 85, 75-88 ။ [ကိုးကားချိန် - ၂]
47 ။ Wysocki, DK နှင့် Childers, စီဒီ (၂၀၁၁)“ ငါ့လက်ချောင်းများကိုစကားပြောခွင့်ပြုပါ” - ဆိုက်ဘာစပေ့မှဆက်စ်တင်နှင့်ဖောက်ပြန်မှု။ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု: တစ်ခု Interdisciplinary လပတ်, 2011, 15-217 ။
https://doi.org/10.1007/s12119-011-9091-4 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
48 ။ Muusses, ld, Kerkhof, P. နှင့် Finkenauer, C. (2015) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး: ညှိယူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အသစ်စက်စက်-Weds ကြားတွင်လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏အတွင်းနှင့်အကြားမိတ်ဖက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ် longitudinal လေ့လာပါ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 45, 77-84 ။
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.077 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
49 ။ Hertlein, KM နှင့် Piercy, FP (2012) Internet Infidelity Treatment ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုကုထုံး၏ဂျာနယ်, 38, 257-270 ။ [ကိုးကားချိန် - ၂]
50 ။ Landripet, ဗြဲနှင့် Stulhofer, အေ (2015) Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated လား? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 12, 1136-1139 ။
https://doi.org/10.1111/jsm.12853 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
51 ။ Aviram, ဗြဲနှင့် Amichai-ဟမ်ဘာဂါ, Y. (2005) အွန်လိုင်းအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း: Dyadic ကျေနပ်မှု၏ရှုထောင့်, ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဖော်နှင့် narcissism ။ Computer ကို-ဖျန်ဖြေဆက်သွယ်ရေး, 10 ၏ဂျာနယ်။
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00249.x [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
52 ။ Hertlein, KM (2011) ကုထုံးအကြပ်အတည်းကိုအင်တာနက်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကုသခြင်း၌တည်၏။ မိသားစုကုထုံး, 39 ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 162-173 ။
https://doi.org/10.1080/01926187.2010.530927 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
53 ။ Hertlein, KM (2012) ဒစ်ဂျစ်တယ်ခိုလှုံရာအ: လင်မယားအတွက်နည်းပညာနှင့်မိသားစုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ မိသားစုဆက်ဆံရေး, 61, 374-387 ။
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00702.x [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
54 ။ Young, KS, Griffin-Shelley, E. , Cooper, A. , O'Mara, ဂျေနှင့် Buchanan, ဂျေ (၂၀၀၀) အွန်လိုင်းဖောက်ဖျက်မှု - ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူစုံတွဲဆက်သွယ်မှုအသစ်ရှုထောင့်။ လိင်စွဲ & compulsivity, 2000, 7-59 ။
https://doi.org/10.1080/10720160008400207 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
55 ။ Whitty, MT (2005) Cybercheating ၏အစစ်အမှန်: သစ်စာမရှိသောအင်တာနက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုယ်စားပြုသည်။ လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 23, 57-67 ။
https://doi.org/10.1177/0894439304271536 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
56 ။ ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, RJ, Markey, CM, Mills က, အေနှင့် Hodges, SD က (2007) လိင်ကွာခြားချက်များ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 57, 101-109 ။
https://doi.org/10.1007/s11199-007-9221-5 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
57 ။ Gottman, JM (၁၉၉၉) လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဆေးခန်း - သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံသည့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး။ WW Norton & Company, နယူးယောက်။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
58 ။ Laumann, EO, Gagnon, JH, Michael, RT နှင့် Michael, အက်စ် (၁၉၉၄)၊ လိင်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်း - ယူအက်စ်တွင်လိင်အလေ့အကျင့်များ။ ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်း, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
59 ။ Ickes, ဒဗလျူ, Dugosh, JW, Simpson ဂျေအေနှင့် Wilson က CL (2003) သံသယဖြစ်စရာစိတ်ထဲ: ဆက်ဆံရေး-သတိပေးချက်ဟာသတင်းအချက်အလက်ကိုဆညျးပူးဖို့လှုံ့ဆျောမှု။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Relationships, 10, 131-148 ။
https://doi.org/10.1111/1475-6811.00042 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
60 ။ အခြေအနေများ၏ရွေးချယ်မှုပေါ် Ickes, ဒဗလျူ, Snyder, အမ်နှင့် Garcia က, အက်စ် (1997) Personality သွဇာ။ ခုနှစ်တွင်: Hogan, R. , ဂျွန်ဆင်, ဂျာ Briggs, SR, Hogan, R. , ဂျွန်ဆင်ဂျေအေနှင့် Briggs, SR, Eds, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်, ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, San Diego မှ, 165-195 ။ ။
https://doi.org/10.1016/B978-012134645-4/50008-1 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
61 ။ Costa, PT နှင့် McCrae, RR (၁၉၉၂) လက်တွေ့ကျင့်ဝတ်တွင်ပုံမှန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစစ်ဆေးခြင်း - NEO ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစာရင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်, 1992, 4-5 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
62 ။ Brennan, KA, Clark, CL နှင့် Shaver, PR (၁၉၉၈) အရွယ်ရောက်သူ - ပူးတွဲမှု၏ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာ - ဘက်ပေါင်းစုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ခုနှစ်တွင်: Simpson, JA နှင့် Rholes, WS, Eds ။ , ပူးတွဲသီအိုရီနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး, Guilford စာနယ်ဇင်း, New York, 1998-46 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
63 ။ Lafontaine, MF ။ နှင့်နှောင်ကြိုး၏ Lussier, Y. (2003) Bidimensional ဖွဲ့စည်းပုံမေတ္တာတော်၌တည်: စှနျ့လှတျများနှင့်နီးစပ်ခြင်း၏ရှောင်ရှားကျော်တော့ပူပန်။ အပြုအမူသိပ္ပံ, 35 ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 56-60 ။
https://doi.org/10.1037/h0087187 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
64 ။ Lafontaine, MF ။ , Brassard, A. , Lussier, Y. , Valois, P. , Shaver, PR နှင့် Johnson, SM (2016) ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမေးခွန်းလွှာတွင်အတွေ့အကြုံအတိုအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်၏ဥရောပဂျာနယ်။ 32, 140-154 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
65 ။ Spanier, GB ကို (1976) Dyadic ညှိယူတိုင်းတာခြင်း: အိမ်ထောင်ရေးနှင့်အလားတူ Dyads များ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ဘို့က New ကြေးခွံ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်, 38, 15-28 ။
https://doi.org/10.2307/350547 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
66 ။ Sabourin, အက်စ်, Valois, P. နှင့် Lussier, Y. (2005) ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်းတစ်ဦး Nonparametric အရာဝတ္ထုအားသုံးသပ်ခြင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူ Dyadic ညှိယူစကေး၏အကျဉ်းချုပ်ဗားရှင်း၏။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်, 17, 15-27 ။
https://doi.org/10.1037/1040-3590.17.1.15 [ကိုးကားအချိန် (s): 2]
67 ။ Nowinski, JK နှင့် Lopiccolo, J. (1979) စုံတွဲများရှိလိင်အပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်သည်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 5, 225-243 ။
https://doi.org/10.1080/00926237908403731 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
68 ။ ဓမ္မဒေသနာ, KJ, Rucker, DD နှင့်ဟေးယက်, AF (2007) အလယ်အလတ််ဖြန်ဖြေယူဆချက် Addressing: သီအိုရီ, နည်းလမ်းများနှင့်ဆေးညွှန်း။ Multivariate အပြုအမူသုတေသန 42, 185-227 ။
https://doi.org/10.1080/00273170701341316 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
69 ။ Muthén, LK နှင့်Muthén, BO (2008) Mplus Usersguide ။ 5th Edition, Muthén & Muthén, Los Angeles ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
70 ။ ပျောက်ဆုံးနေဒေတာများနှင့်အတူ Wothke, ဒဗလျူ (2000) longitudinal နှင့် Multigroup မော်ဒယ်လ်။ ခုနှစ်တွင်: Little က, TD, Schnabel, KU နှင့် Baumert, ဂျေ, Eds, longitudinal နှင့် Multilevel ဒေတာများကိုမော်ဒယ်။ ။ လက်တွေ့ပြIssနာများ, အသုံးချချဉ်းကပ်မှုနှင့်တိကျသောဥပမာများ, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, 219-240 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
71 ။ Hoyle, RH (1995) The Structural Equation Modeling ချဉ်းကပ်ပုံ - အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အခြေခံပြIssနာများ။ ခုနှစ်တွင်: Hoyle, RH, Ed က။ , ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်: အယူအဆများ, ပြuesနာများနှင့် applications များ, Sage ထုတ်ဝေ, ထောင်သပိတ်, 1-15 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
72 ။ Browne, MW နှင့် Cudeck, R. (၁၉၉၃) Model Fit ကိုအကဲဖြတ်သည့်အခြားနည်းလမ်းများ။ ခုနှစ်တွင်: Bollen, KA နှင့် Long က, JS, Eds, စမ်းသပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်း & Models, Sage, Newbury ပန်းခြံ, 1993-136 ။ ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
73 ။ Amato, PR စနစ် (2010) ကွာရှင်းအပေါ်သုတေသန: တည်မြဲသည့်တိုးတက်မှုများနှင့် New Trends ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်, 72, 650-666 ။
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
74 ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် Dyadic ညှိယူအကြားဆက်ဆံရေးတစ်ဦးမော်အဖြစ်ပြည်ထောင်စု Bouchard က, G. အများနှင့် Arseneault, ဂျေ (2005) တာရှည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 39, 1407-1417 ။
https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.05.005 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
75 ။ ကုသမှု-ရှာစုံတွဲများအတွက် Neuroticism နှင့် Dyadic ညှိယူအကြား Daspe, အမ်, Sabourin, အက်စ်, Péloquin, K. , Lussier, Y. နှင့် Wright, ဂျေ (2013) Curvilinear အစည်းအရုံးများ။ မိသားစုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 27, 232-241 ။
https://doi.org/10.1037/a0032107 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
76 ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorder ၏ Widiger, TA နှင့် Mullins-Sweatt, SN (2009) ငါးခု-Factor မော်ဒယ်: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုချက်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 5, 197-220 ။
https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153542 [ကိုးကားအချိန် (s): 3]
77 ။ Ghosh, အေနှင့် Dasgupta, အက်စ် (၂၀၁၅) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက် Facebook အသုံးပြုမှု။ အသုံးချစိတ်ပညာ၏အိန္ဒိယအကယ်ဒမီဂျာနယ်, 2015, 41-101 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
78 ။ Muscanell, NL နှင့် Guadagno, RE (2012) နယူးသူငယ်ချင်းများ Make သို့မဟုတ်ပွငျသစျဟောငျးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ: လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ကျားနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွာခြားချက်များ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 28, 107-112 ။
https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.016 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
79 ။ လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုဒ်များ၏လူငယ်လူကြီးများ '' သုံးစွဲမှု Wilson က, K. , Fornasier, အက်စ်နှင့်အဖြူရောင်, KM (2010) စိတ်ဓာတ်ခန့်မှန်း။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 13, 173-177 ။
https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0094 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
80 ။ sexting ၏ခန့်မှန်းအဖြစ် Delevi, R. နှင့် Weisskirch, RS (2013) Personality အချက်များ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 29, 2589-2594 ။
https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.06.003 [ကိုးကားအချိန် (s): 1]
81 ။ Barnes, GE, Malamuth, NM and Check, JV (1984) Personality and Sexuality ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွာခြားချက်များ, 5, 159-172 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
82 ။ Kenny, DA, Kashy, DA နှင့် Cook, WL (2006) Dyadic Data Analysis ။ Guilford စာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
83 ။ Schneider, JP (၂၀၀၂)“ Room ည့်ခန်းရှိဆင်” သစ် - အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မလိုက်နာသောဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုအပြုအမူများ။ ခုနှစ်တွင်: Cooper, အေ, Ed ။ , လိင်နှင့်အင်တာနက်။ Clinician များအတွက်လမ်းညွှန်, Brunner-Routledge, New York, 2002-169 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]
84 ။ Lambert, NM, Negash, S. , Stillman, TF, Olmstead, SB နှင့် Fincham, FD (၂၀၁၂) ကြာရှည်မခံသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုနှင့်လူတစ် ဦး ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ်ကတိသစ္စာအားလျော့နည်းသွားခြင်း။ လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 2012, 31-410 ။ [ကိုးကားသည့်အချိန် - ၁]